အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၁) | Ko Rohingya
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၁)
သို့ပါ၍ ထိုသို့ ဆန်းစစ်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ ထိပ်ဆုံးပိုင်းမှ “စတင်”၍ ဆန်းစစ် ဖော်ထုတ်ကြရပေမည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဓာတု ဦးသိန်းစိန်အား အရင်ဆုံး ဆန်းစစ်ကြည့်ရန် လိုပါသည်။ ဓာတုဦးသိန်းစိန်၏ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ခုနှစ်စလုံး မြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ လူသားများ အချင်းချင်း (မြန်မာ + မြန်မာ) လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ မွေးဖွားလာသူလော။ သို့မဟုတ် မြန်မာ + ရခိုင်၊ မြန်မာ + ချင်း၊ မြန်မာ + ကရင် စသည့် လူမျိုးကွဲပြားသူများ လက်ထပ်ပေါင်းသင်း၍ ရရှိလာသူလော။ ဤအချက်ကို အဖြေထုတ်ရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ အနှီ ဦးသိန်းစိန်သည် လူမျိုးကွဲပြားသည့် ဥပမာ- ရခိုင် + မြန်မာ ပေါင်းသင်း၍ ရလာသူဖြစ်လျှင် အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအနေနှင့် ၎င်းအား သမ္မတရာထူးမှ ဖယ်ရှားသင့်ပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကိုယ်တိုင် လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိသည့် မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပင်။
သို့ပါ၍ ကျွန်ုပ် Ko Rohingya မှ အနှီ ဦးသိန်းစိန်သည် ဘိုးစဉ်ဘောင်စဉ် ခုနှစ်ဆက်စလုံး လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှ (ဥပမာ- မြန်မာ (သို့မဟုတ်) ရခိုင် (သို့မဟုတ်) ချင်း) ဆင်းသက်လာကြောင်းကို ၎င်း၏ ဘိုးဘွားဘီဘင် အထက်ထက်၊ အဆက်ဆက်တို့၏ မွေးစာရင်းများ၊ သေစာရင်းများ အိမ်ထောင်စု စာရင်းများ၊ အစိုးရ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော ကိုးကားနိုင်လောက်သည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့်တကွ တင်ပြနိုင်သူအား ဆုတော်ငွေ မြန်မာကျပ် (၁၁) သိန်းတိတိ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြေညာမောင်းခတ် လိုက်ရပါသည်။
This entry was posted on February 6, 2013, in စိန်ခေါ်မှုများ and tagged စစ်အာဏာရှင်, စိန်ခေါ်မှုများ, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, ဦးသိန်းစိန်. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နှုတ်က္ခပါဌ်တော်
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူများအား စိန်ခေါ်ခြင်း (၂) →